Ngaba Ukunyaniseka Kworhwebo Kufile Ngokwenene? Okanye ngaba ukunyaniseka kwabaThengi? | Martech Zone
Ngaba Ukunyaniseka Kworhwebo Kufile Ngokwenene? Okanye ngaba ukunyaniseka kwabaThengi?
NgoMvulo, nge-18 kaDisemba ngo-2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Nanini na xa ndithetha ngokunyaniseka kwegama, ndidla ngokwabelana ngebali lam xa ndithenga iimoto zam. Kwisithuba seminyaka elishumi, ndandinyanisekile kwiFord. Ndisithandile isitayile, umgangatho, ukuzinza, kunye nexabiso lokuthengiswa kwakhona kwemoto nganye kunye nelori endiyithengileyo kwaFord. Kodwa yonke loo nto yatshintsha malunga neminyaka elishumi eyadlulayo xa imoto yam yakhumbula.
Nanini na xa amaqondo obushushu esihla ngaphantsi komkhenkce kwaye ukufuma kuphezulu, iingcango zemoto yam ziya kuvuleka ngumkhenkce. Ngamanye amagama, wakuba uwuvulile umnyango awunakuwuvala. Emva kwamaxesha aliqela ndibambe ucango lwecala lomqhubi wam luvaliwe, indawo endithenge kuyo ndathenga imoto ekubeni ingavumi ukusebenza kuyo simahla kwakhona. Ndijonge ngokungummangaliso kummeli kwaye ndamazisa ukuba kunjalo ayikaze ilungiswe emveni kweminyaka. Umphathi wasikhaba isicelo sam kwaye wathi bayenzile inkumbulo ngokweemfuno zikaFord kwaye kwafuneka baqale ukundihlawulisa ngalo lonke ixesha ndizisa imoto.
Ngaphambi kwalowomzuzu, ndandinyanisekile kuluphawu. Nangona kunjalo, itshintshile ngephanyazo xa ndafumanisa ukuba uphawu aluthembekanga kum.
Kwakundicaphukisile ukuqhuba iFord yam ndayiwela isitalato kwaye ndathengisa imoto ndaya kwiCadillac entsha kraca. Kwiinyanga ezimbalwa kamva, ndathetha nonyana wam ukuba athenge iFord wathenga iHonda. Ke, ngemali engaphantsi kwe- $ 100 emsebenzini, iFord ilahlekelwe yintengiso entsha yeemoto ezimbini ngokungaqinisekisi ukuba ndikhathalelwe njengomthengi.
Wonke umntu uhlala ebuza ukuba okanye hayi Ukunyaniseka kwegama ufile. Ndiyakholelwa ukuba kufuneka sibuze okwahlukileyo ukunyaniseka kwabathengi ufile?
Kuphela yi-23% yabathengi abathembekileyo kulo naluphi na uphawu kule mihla Kutheni? Ewe, sinombulelo nge-Intanethi ezandleni zethu, sinokukhetha. Ngamanye amaxesha amakhulu okhetho. Akukho sidingo sokunyaniseka kwintengiso enengxaki, abathengi banokuchitha imizuzwana engama-30 kwaye bafumane uphawu olutsha. Kwaye mhlawumbi uphawu olunombulelo ngakumbi kwishishini lomthengi.
Kutheni abaThengi bahlukana neBrand?
I-57% yabathengi bayaphula uphawu xa yabo uphononongo olubi luhlala lungaphendulwanga Ngelixa iimveliso ezifanayo ziqhubeka nokunikezelwa
Iipesenti ezingama-53 zabathengi baqhekeza uphawu xa sele benalo ukuvuza kwedatha kunye nokophula idatha
I-42% yabathengi bayaphula uphawu xa kukho akukho nkonzo yabathengi ihlala / yexesha lokwenyani inkxaso
I-38% yabathengi bayaphula uphawu xa kukho akukho ntengiso ngexesha kunye nokunyuselwa okanye izibonelelo
Kwilizwe lezaphulelo kunye nezinto ezilahlwayo, ndiyakholelwa ukuba amashishini aphulukene nexabiso lomthengi othembekileyo. Unyaka emva konyaka, ndincedisa amashishini ukuqhuba ngakumbi ekukhokeleni nasekufumaneni iimveliso kunye neenkonzo. Xa bendibuza ukuba yintoni enokuba bayenza ngcono, phantse ndihlala ndiqala ukubabuza malunga nokugcinwa kunye neenkqubo zabo zokunyaniseka. Kuyaphambana kum ukuba iinkampani ziya kuchitha amakhulu okanye amawaka eedola ukufumana umthengi, kodwa iya kubakhanyela ngamava abathengi anokubiza iqhezu lalonto.
Nokuba njengearhente, bendisebenza kwisicwangciso sam sokugcina. Xa ndinengeniso ethile yabasebenzi kulo nyaka, ndiphosile kulindelo oluthile kubaxhasi. Ngaphambi kokuba ndilahlekelwe ngabathengi, ndadibana nabo, ndacutha izivumelwano zabo, ndaza ndanikezela ngeendlela zokufumana umsebenzi. Ndiyazi ukuba kunzima kangakanani ukufumana ukuthembela kwabathengi kwaye xa kusemngciphekweni, ndiyazi ukuba kufuneka ndinyuse kwaye ndizame ukuyilungisa. Ayisebenzi ngalo lonke ixesha, kodwa ibhetele kakhulu kunokuba ugxothwe kwaye ujike abathengi basekhohlo nasekunene.
Sabelane nje nge-infographic evela eBolstra kwi I-ROI yokunyaniseka kwabaThengi. Amaqonga okuphumelela kwabaThengi afana nalawo asetyenziselwa ukufundisa abasebenzi bangaphakathi, ukuchonga imiba eqhubela abathengi ekushiyekeni, kwaye ikuncede ulinganise ifuthe lokuphumelela kwabathengi kwinzuzo yophawu lwakho. Imibutho ekhulileyo iyabona ukuba inzuzo yabo iyonke ichaphazeleka kakhulu xa ukugcinwa kwabathengi kwabo kuyehla. Ukuzalisa i-emele kuya kusebenza kuphela ude uphelelwe yimali-esiyibonayo ngokuqala okuninzi.
Nantsi infographic epheleleyo yoPhononongo lukaRave, Ukunyaniseka kweBrand kufile:
tags: Ukunyaniseka kwegamaUkunyaniseka kwegama kufileukunyaniseka kwabathengiInkonzo eyenzelweAbaxhasiukuphulwa kwedathaukuvuza kwedathauhlala ngcokolaphila ngenkonzo yabathengiphila inkxasoIinkqubo zokunyanisekauphononongo olubiRaveuphononongo kwakhonaInkonzo yabathengi yexesha langempelaukuthengisa kunye nokunyusa
Ulungelelwaniso: Abathengisi bayandisa njani iMithombo yeendaba ngeZinto ezihlawulelweyo kunye nezoHlawulwayo eziNikezelweyo
I-Ahrefs isungula isiXhobo seNtsha seNgcaciso soPhicotho lweSiza